प्रचण्डका लागि पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल फेरि गलपासो बन्ने संकेत ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
प्रचण्डका लागि पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल फेरि गलपासो बन्ने संकेत !
नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल फेरि गलपासो बन्ने संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीतिमा कटवाल काण्ड चर्चित छ । यसलाई प्रधानसेनापति प्रकरण पनि भनिन्छ । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापतिको नियुक्तिपत्र नै दिएका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्णय रोकेका कारण सेनापति कटवाल पदमै रहे । यो प्रकरणपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।